Gabadh Gacmo La’aan Ku Dhalatay Oo Guursanaysa & Saxaafadda Caalamka Oo Ay Soo Jiidatay +SAWIRRO – somalilandtoday.com
Gabadh Gacmo La’aan Ku Dhalatay Oo Guursanaysa & Saxaafadda Caalamka Oo Ay Soo Jiidatay +SAWIRRO
(SLT-Texas) Haweeneey Dhalatay Iyadoo Aan Gacmo Laheyn & Qaar ka mid ah Faraheeda Lugaha ayaa waxay sheegtay inay markii udabaal degeysay 18 Sano Jirkeeda,taas oo kudhawaaqaday inay qorsheyneyso in ay guursaneyso.
Jlissa Austin, Oo Ah 30,Sano Jir Ah ayaa waxay katimid Magaalada Houston Gobolka Texas Dalka Mareykanka,waxay la istaagtay nin ka dheer Afar meelood Seddex Meel,iyadoo ay sheegtay in ay dooratay Johnathon Shorter in Nolosha Jaceylkeeda uu siiyey isagana ay xulatay.
Johnathon ayaa Yiri “Jlissa waa Qof igu weyn,waxaana Saaxiib aad igu leh Qiimo sare,waxay tahay qof la jeclaan karo awoodna uleh”.
“Waxaan dhameystirnay inaan Noqono Koox Hadda isku xiran”.
Johnathon ayaa ah ninka ay dooratay Gabadha Gacma la’aanta ku dhalatay,waxaana uu sheegay in 13 Sano ka hor ay kulmeen ilaa xilligaasina Saaxiibtinimo wadaag ahaayeen,waxa uu sheegay in midkeen midka kale jaceyl wadaag noqdeen.
Warbaahinta Caalamka ayaa maanta oo Khamiis aheyd waxay warbixin ka sameeyeen Gabdhaan Guurkeeda isku diyaarineysa.